တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်း
ဤသည်မှာ တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်းဖြစ်သည်။ ဤစာရင်း၌ တောင်အမေရိကနှင့် တောင်အမေရိကတိုက်မှနဟုတ်သော နိုင်ငံများ၏ အပြည့်အဝအသိအမှတ်ပြုနိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေနှစ်များလုံး ပါဝင်သည်။ ဤစာရင်းတွင် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ ၁၂ ခုနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မဟုတ်သော နယ်မြေ ၄ ခုတို့ပါဝင်သည်။
တောင်အမေရိကတိုက်သည် အနောက်ဘက်တွင် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့် မြောက်ဘက်နှင့်အရှေဘက်တွင် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတို့မှ ဝန်းရံထားသည်။ မြောက်အမေရိကတိုက်နှင့် ကာရစ်ဘီယံ ပင်လယ်သည် အနောက်မြောက်အရပ်တွင် တည်ရှိသည်။ တောင်အမေရိကတိုက်၏ ဧရိယာသည် ခန့်မှန်း ၁၇,၈၄၀,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၆,၈၉၀,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်)ရှိသည် သို့မဟုတ် ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်၏ ၃.၅% နီးပါးရှိသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် The World Factbook ၏ လူဦးရေခန့်မှန်းချက်အရ တောင်အမေရိကတိုက်၏ လူဦးရေသည် သန်း ၃၈၀ ကျော်ရှိသည်။ တောင်အမေရိကတိုက်သည် အာရှ၊ အာဖရိကနှင့် မြောက်အမေရိကတိုက်တို့ပြီးလျှင် စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံး တိုက်ဖြစ်ပြီး အာရှ၊ အာဖရိက၊ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိကတိုက်တို့ပြီးလျှင် ပဉ္စမမြောက်လူဦးရေအများဆုံး တိုက်ကြီးဖြစ်သည်။
မြောက်အမေရိကတိုက်နှင့် တောင်အမေရိကတိုက်ကြားတွင် နယ်မြေခွဲခြားမှုသည် ရှင်းလင်းမှုမရှိပဲ Isthmus of Panama တွင် တည်ရှိနေနိုင်သည်။
၂ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ အစိတ်အပိုင်းများ
၃ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများ၏ အမှီအခိုနယ်မြေများ
၄ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ
အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများသည် လူထုအတွက် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့်ပတ်သက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များပြုလုပ်ရေးတွင် ထိရောက်သော အချုပ်အခြာအာဏာရှိသည့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ မွန်တီဗီဒီယိုသဘောတူညီချက် (Montevideo convention)အရ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတော်သည် အမြဲတမ်းနေထိုင်သော လူထု၊ တိကျသော နယ်မြေ၊ အစိုးရနှင့် အခြားနိုင်ငံများ ဆက်ဆံရေးဝင်ဆံမှု ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါနိုင်ငံများသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး တောင်အာဖရိကသမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများလည်း ဖြစ်ကြသည်။
English Short Name,
and ISO Code
COL စပိန်: Colombia — República de Colombia ဘိုဂိုတာမြို့ / Santa Fe de Bogotá
စပိန်: Bogotá ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "["။ ၁,၁၃၈,၉၁၀ km2 (၄၃၉,၇၃၆ sq mi)
ချီလီနိုင်ငံ [n ၁]
CHL စပိန်: Chile — República de Chile ဆန်တီယာဂိုမြို့[n ၂]
စပိန်: Santiago ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "["။ ၇၅၆,၁၀၂ km2 (၂၉၁,၉၃၃ sq mi)
GUY အင်္ဂလိပ်: Guyana — Co-operative Republic of Guyana Georgetown
အင်္ဂလိပ်: Georgetown ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "["။ ၂၁၄,၉၆၉ km2 (၈၃,၀၀၀ sq mi)
SUR ဒတ်ချ်: Suriname — Republiek Suriname Paramaribo
ဒတ်ချ်: Paramaribo ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "["။ ၁၆၃,၈၂၀ km2 (၆၃,၂၅၁ sq mi)
PRY စပိန်: Paraguay — República del Paraguay
စပိန်: Asunción ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "["။ ၄၀၆,၇၅၂ km2 (၁၅၇,၀၄၈ sq mi)
PER စပိန်: Perú — República del Perú
စပိန်: Lima ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "["။ ၁,၂၈၅,၂၁၆ km2 (၄၉၆,၂၂၅ sq mi)
VEN စပိန်: Venezuela — República Bolivariana de Venezuela ကရာကက်စ်မြို့
စပိန်: Caracas ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "["။ ၉၁၂,၀၅၀ km2 (၃၅၂,၁၄၄ sq mi)
BRA ပေါ်တူဂီ: Brasil — República Federativa do Brasil ဘရာစေးလေးယားမြို့
ပေါ်တူဂီ: Brasília ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "["။ ၈,၅၁၄,၈၇၇ km2 (၃,၂၈၇,၆၁၂ sq mi)
BOL စပိန်: Bolivia — Estado Plurinacional de Bolivia
တမ်းပလိတ်:Lang-ay Sucre (official)
La Paz[n ၃] ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "["။ ၁,၀၉၈,၅၈၁ km2 (၄၂၄,၁၆၄ sq mi)
ARG စပိန်: Argentina — República Argentina ဗျူနိုအေးရိစ်မြို့
စပိန်: Ciudad de Buenos Aires ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "["။ ၂,၇၈၀,၄၀၀ km2 (၁,၀၇၃,၅၁၈ sq mi)
ECU စပိန်: Ecuador — República del Ecuador
စပိန်: Quito ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "["။ ၂၈၃,၅၆၁ km2 (၁၀၉,၄၈၄ sq mi)
ဥရုဂွေး အရှေ့တိုင်း သမ္မတ နိုင်ငံ[n ၄]
URY စပိန်: Uruguay — República Oriental del Uruguay မွန်တီဗွီဒီယိုမြို့
စပိန်: Montevideo ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "["။ ၁၇၆,၂၁၅ km2 (၆၈,၀၃၇ sq mi)
အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ အစိတ်အပိုင်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
GUF Overseas region and constituent part
of the French Republic[n ၅] ပြင်သစ်: Guyane Cayenne
ပြင်သစ်: Cayenne 7005296711000000000♠296711 00083534 !၈၃,၅၃၄ km2 (၃၂,၂၅၃ sq mi)
Bouvet Island[None ၁]
BVT Dependent territory of Norway နော်ဝေး: Bouvetøya No permanent population 00000049 !၄၉ km2 (၁၉ sq mi)
FLK British overseas territory အင်္ဂလိပ်: Falkland Islands
စပိန်: Islas Malvinas Stanley
အင်္ဂလိပ်: Stanley ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "["။ 00012173 !၁၂,၁၇၃ km2 (၄,၇၀၀ sq mi)
South Georgia and the South Sandwich Islands[n ၆]
SGS British overseas territory အင်္ဂလိပ်: South Georgia and the South Sandwich Islands King Edward Point
အင်္ဂလိပ်: King Edward Point No permanent population[n ၇] 00003903 !၃,၉၀၃ km2 (၁,၅၀၇ sq mi)
GDP (PPP) per capita[n ၈]
Argentina !Argentina Argentine peso 7004142000000000000♠14200 
Bolivia !Bolivia Boliviano 7003450000000000000♠4500 
Bouvet Island !Bouvet Island† (Norway) N/A N/A
Brazil !Brazil Brazilian real 7004101000000000000♠10100 
Chile !Chile Chilean peso 7004149000000000000♠14900 
Colombia !Colombia Colombian peso 7003890000000000000♠8900 
Ecuador !Ecuador United States dollar 7003750000000000000♠7500 
Falkland Islands !Falkland Islands (United Kingdom) Falkland Islands pound 7004354000000000000♠35400 (2002 est.) 
French Guiana !French Guiana (France) Euro 7003600000000000000♠6000 (2001 est.) 
Guyana !Guyana Guyanese dollar 7003390000000000000♠3900 
Paraguay !Paraguay Paraguayan guaraní 7003420000000000000♠4200 
Peru !Peru Peruvian nuevo sol 7003840000000000000♠8400 
South Georgia and the South Sandwich Islands|South Georgia and the South
Sandwich Islands !South Georgia and the South
Sandwich Islands† (United Kingdom) N/A N/A
Suriname !Suriname Surinamese dollar 7003890000000000000♠8900 
Uruguay !Uruguay Uruguayan peso 7004122000000000000♠12200 
Venezuela !Venezuela Venezuelan bolívar 7004135000000000000♠13500 
† Geographicallyapart of Antarctica, the United Nations geoscheme includes Bouvet Island and South Georgia and the South Sandwich Islands in South America.
↑ While Santiago is the constitutional capital of Chile, Valparaíso is the site of legislative meetings.
↑ While Sucre is the constitutional capital, La Paz is the seat of the government.
↑ Also translated as "Oriental Republic of Uruguay".
↑ The territory has been fully integrated into the French central state.
↑ Sometimes grouped with Antarctica rather than South America.
↑ Present inhabitants are the British Government officer, deputy postmaster, scientists, and support staff from the British Antarctic Survey who maintain scientific bases on Bird Island and in the capital, King Edward Point, as well as museum staff at Grytviken.
↑ The CIA's estimate for GDP per capita (PPP) is used in the article. For the World Bank and International Monetary Fund's estimates, see List of countries by GDP (PPP) per capita.
↑ The New York Times Guide to Essential Knowledge: A Desk Reference for the Curious Mind (2nd ed.)၊ New York: St. Martin's Press၊ 2007၊ p. 598၊ ISBN 0-312-37659-6၊ OCLC 173243876
↑ Ashley, Richard K (1 June 1988). "Untying the Sovereign State: A Double Reading of the Anarchy Problematique". Millennium - Journal of International Studies4(2): 227–262. Sage Journals Online. doi:10.1177/03058298880170020901. Retrieved on ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀. Archived 11 December 2019 at the Wayback Machine.
↑ Montevideo Convention on the Rights and Duties of States။ Council on Foreign Relations (26 December 1933)။ 28 June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ United Nations Member States။ United Nations။ ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Estados Miembros (in Spanish)။ Secretaria General de UNASUR။ 27 June 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ Field Listing :: Names။ Central Intelligence Agency။7January 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ UNGEGN List of Country Names။ United Nations Statistics Division (2007)။ 2011-02-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ ၈.၃ List of countries, territories and currencies။ Europa (7 February 2012)။7February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ Field Listing :: Capital။ Central Intelligence Agency။7January 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UNGEGN World Geographical Names။ United Nations Group of Experts on Geographical Names (9 December 2011)။7February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ Country Comparison :: Population။ Central Intelligence Agency။ 27 September 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ ၁၂.၂ Field Listing :: Area။ Central Intelligence Agency။7January 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ INSEE။ Estimation de population par région, sexe et grande classe d'âge – Années 1975 à 2019 (in fr)။6February 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2019-01-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2016 Census Report (PDF)။ Policy and Economic Development Unit, Falkland Islands Government (2017)။ 24 January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook: Argentina။ CIA Directorate of Intelligence (2008-05-15)။ 12 June 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook: Bolivia။ CIA Directorate of Intelligence (2008-05-15)။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook: Brazil။ CIA Directorate of Intelligence (2008-05-15)။ 22 December 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook: Chile။ CIA Directorate of Intelligence (2008-05-15)။6November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook: Colombia။ CIA Directorate of Intelligence (2008-05-15)။ 13 May 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook: Ecuador။ CIA Directorate of Intelligence (2008-05-15)။ 12 June 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook: Falkland Islands (Islas Malvinas)။ CIA Directorate of Intelligence (2008-05-15)။ 1 February 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Americas Review 2003/2004: Economic and Business Report (21st ed.)။ London: Kogan Page။ 2003။ p. 79။ ISBN 0-7494-4064-3။ ISSN 1351-4571။
↑ Résultats régionaux des enquêtes de recensement de 2004 à 2007 (in fr)။ INSEE။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook: Guyana။ CIA Directorate of Intelligence (2008-05-15)။ 26 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook: Paraguay။ CIA Directorate of Intelligence (2008-05-15)။4November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook: Peru။ CIA Directorate of Intelligence (2008-05-15)။5November 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook: Suriname။ CIA Directorate of Intelligence (2008-05-15)။7January 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook: Uruguay။ CIA Directorate of Intelligence (2008-05-15)။7January 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook: Venezuela။ CIA Directorate of Intelligence (2008-05-15)။ 24 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ကိုးကား အမှား - <ref> tags exist foragroup named "None", but no corresponding <references group="None"/> tag was found
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ_အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့်_အမှီအခိုနယ်မြေများ_စာရင်း&oldid=732461" မှ ရယူရန်
နော်ဝေးဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၁:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။